Kusolwa isinyama kuKomphela | News24
Kusolwa isinyama kuKomphela
Durban - Basola isinyama kuSteve Komphela ongumqeqeshi weKaizer Chiefs abalandeli bale kilabhu njengoba bekholwa wukuthi ngeke inqobe lutho uma engakhishwa sona ngoba ayifuni ukumxosha.
IChiefs iphinde esidume ngakho iwashiswa ijezi kwi-semi-final yeTelkom Knockout yiBidvest Wits iyiguqisa ngoMgqibelo ntambama ngo-1-0 eBidvest Stadium, eGoli, kubika ILANGA.
Igoli okunqobe ngalo iWits lingqofelwe enethini nguJames Keene ngomzuzu ka-28. IChiefs iqede lo mdlalo ingasaphelele kukhishwa ngekhadi elibomvu uWiseman Meyiwa odlala esiswini.
IziMpofana ziye kulo mdlalo ziyizimfivilithi kwazise zisefomini kulezi zinsuku kanti iWits idonsa ngodizili. Nokho ziphoxe abalandeli bazo abebephume ngezinkani ukuzozeseka, bahamba bejabhile.
Omunye wabalandeli beChiefs ocele ukuba igama lakhe lingadalulwa ngoba unobudlelwano obuhle nekilabhu, uthi benozakwabo basola ukuthi uKomphela unesinyama okufanele akhishwe sona uma kuwukuthi le kilabhu izimisele ngokuthatha inkomishi ngale sizini.
"UKomphela siyamthanda impela futhi ikilabhu isiqala ukudlala kahle ngaphansi kobuholi bakhe kodwa izinkomishi ziyamphika. IChiefs idume ngokuba nenhlanhla kodwa lokhu okwenzeka manje kuyacaca ukuthi ngumqeqeshi onesikhwakhwalala okufanele ayokhishwa sona ukuze ziphinde ziqonde izinto ekilabhini.
"UKaizer Motaung ungumuntu omnyama uyazazi lezi zinto angazenzi impumputhe, uKomphela udinga ukuyokhishwa isikhwakhwalala ngoba abafuni ukumxosha.
"Le nkomishi bese siyibalile ngendlela ebesiza kahle ngayo kuyona kuyethusa ukuthi siphumile, akukholakali," kusho lo mlandeli ogcizelele ukuba igama lakhe lingadalulwa.
Udaba oluphelele kwiLANGA.